सरकारले प्रहरीको मनोबल उच्च हुने वातावरण कहिले तयार गर्छ ? – Etajakhabar
सरकारले प्रहरीको मनोबल उच्च हुने वातावरण कहिले तयार गर्छ ?
पोखरा, २७ असोज । नेपाल प्रहरीको ६२ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा समाजमा विधिको शासन कायम गराउन प्रहरीको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेमा जोड दिइएको छ ।
शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गराउँदै सामाजिक विकृति, विसंगतिको अन्त्य गराउन नेपाल प्रहरीले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको बताउँदै वक्ताहरुले सरकारले प्रहरीको मनोबल उच्च हुने वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन २७, २०७४ समय: १३:०४:४४